Maatiin Obbo Nadhii Gammadaa maal jedhu? - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Fuula feesbuukii Abbaa Alangaa Federaalaa
Goodayyaa suuraa Waajjira Abbaa Alangaa Federaalaa
Namooti waggoota dheeraaf achi buuteen isaanii dhabamee turan nuuf haa barbaadamanii jedhu maatiin.
Gaggeessaa olaanaa ABO kan turan Obbo Nadhii Gammadaa dabalatee maatii isaanii keessaa nama sadi du'aafi jireenya isaanii hin beeknu jedhu Obboleessa angafaa Obbo Nadhii kan ta'an obbo Amaan Usmaan.
Turtii gabaabaa BBC'n Obbo Amaan waliin taasiseen , waggoota 26 darban kana akkamiin iyyaafataa akka turanii fi mataasaaniifillee sodaachaa turuu dubbataniiru.
''Eessa barbaanna, akkamiin barbaadna, isa barbaaduu dhiisiitii mataa keenyaafillee ni sodaanna,'' jedhan.
Gadi qabaadhaanis ta'u, karaa nama beeknuutiin hinuma iyyaafataa turre jedhan Obbo Amaan.
Garuu ifatti baanee iyyannaa iyyannee warra aanga'oota gaafachuun waan yaadamu waan hin turreef, ammallee qara ilaalaa hafneerra jedhan.
''Sodaarraa kan ka'e, haasawuu waan hin dandeenyeef akkasumatti rakkoo kana baannee jiraachaa turre, ammammoo erga xiqqoo qilleensi nuuf tolee gaafachaa jirra."
"Isa qofaa miti, nama waggaa 52 obboleessuma keenya nama Ibraahim Usmaan jedhamullee erga dhabnee kunoo waggaa 26 ta'eera," jedhu.
"Akkuma kan Nadhii odeessanillee kan isaa namni odeessu hin jiru, erga bara 1984 badee as. Yoo maatiin dubbate malee namni beeku hin jiru kan Nadhii qofa beeka namni, Nadhiin maqaan isaa Qaasim Usmaan ture ''
Obbo Amaan Usmaan seenaa biraa kan ala isaan ilaalchisaa hafe wayita dubbatan, ''Mucaa kiyya hangafaa Kaliil Amaan kan silaa har'a umuriinsaa waggaa 46 ta'u bara ADWUIn biyya gale sana kan fudhatame ammallee achi buutee isaa hin arganne.
Mucaankoo xiqqoo fayyaa dhabee turee, Xiqur Ambassaa galee ture. Isa booda Komishiniin Daa'immanii ofitti fudhatee alatti erginee yaalchifna jedhee amma yoonaa eessa akka bu'e hin beekne. Manuma kana keessaa nama saditu achi buuteensaanii dhabamee jira.
Kun waggoota hedduuf dhukkuba nutti ta'ee maatii keenya quucarseera, du'anii fi jiraataniisaanii wanti beekamu hin jiru.'' jedhanii haala gaddisiisaadhaan dubbatu.
Dhimma namoota achi buuteen isaanii hin beekamne ilaalchisuun Abbaa Alangaa Federaalaa quba qabaa laata jennee garasitti bilbillee turre. Dubbi himaa Abbaa Alangaa Federaalaa kan ta'an Obbo Tasfaayeen akkas jedhu.
''Asirratti deebiin kennamuu danda'u, namoota achi buuteen isaanii hin beekamne kan jedhu qaama jedhetu beeka. Sadarkaa kanatti qaamni gaaffii dhiyeessu yoo jiraate gaafficha galmeessee kan qulqulleessu jira. Deebiin malus kan kennamuuf ta'a.'' jedhan.
Akka mootummaatti mootummaan to'annoo jala oolchee kan of harkaa qabu hooggantoonni olaanoon ABO jiru moo hin jiran gaaffii jedhuuf wayita yaada kennan sadarkaa kanatti yaadni kennuu danda'an akka hin jirre dubbatan.
Hidhamtoonni himanni isaanii osoo adda hin citin ammallee mana hidhaa jiran hedduudha, kana ilaalchisuunis yaada laataniiru. ''Namoonni 137 ta'an kan himanni shororkeessummaa irraa ka'e jiru.
Kan hafan yoo jiraatanis galmeensaanii ilaalamee himatni isaanii kan adda citu, dhiifamni kan godhamuuf yoo jiraate kan ilaalamu ta'a. Mootummaan kanarratti hojjetaa jira'' jedhan.